Ọzụzụ Ahụike Uche - Bromley, Lewisham & Mindwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Ọzụzụ gbasara ọgụgụ isi
Ọzụzụ ahụike ọgụgụ isi anyị zuru oke na-enyere ndị otu aka imeziwanye ọdịmma nke ndị ha, na-eme ka a mata banyere nsogbu ahụike ọgụgụ isi ma na-enyere aka iwulite nkwụsi ike. Obi dịkwa anyị ụtọ na anyị nwere ike ịnye ọzụzụ maka Ahụike Mbụ maka Ahụike maka ndị otu na ndị mmadụ n'otu n'otu.
Anyị na-enye ọzụzụ anyị ugbu a na ntanetị na ihu na ihu, na-agbaso mgbochi nchekwa COVID-19.
Mee ngwugwu ọzụzụ gi
Ezubere usoro ọmụmụ anyị iji nye gị mgbanwe iji jikọta ma dakọtara modulu nke ga-egbo mkpa ndị ọrụ gị. Ihe nkwado ahụike ọ bụla nzukọ gị chọrọ, anyị nwere ike ịnye ngwugwu ọzụzụ dị mma maka ndị otu gị.
Isi Iche Ahụ Ọzụzụ Ndị Isi
Ọkachamara enyemaka enyemaka mbụ nke ahụike uche na-akwadebe ndị ọrụ gị ka ha bụrụ ndị enyemaka mbụ na-arụ ọrụ nke ọma na ntụkwasị obi, nwee ike ịhụ akara ngosi wee zaghachi mkpa ahụike uche nke onye nwere nsogbu ahụike uche.
Ihe nchịkọta ọzụzụ dị njikere ịga
Na-achọ ọzụzụ dị njikere ịga? Usoro ọmụmụ anyị zuru oke ga -egbo mkpa ndị otu gị, wee gụnye usoro maka ndị ndụmọdụ ndị ahịa, na -abawanye nghọta ha gbasara nsogbu ahụike uche yana otu ha nwere ike isi metụta ndị ahịa.
Mmemme ụlọ akwụkwọ Minds Up
Minds Up has been developed by BLG Mind specifically for secondary school pupils. The programme increases young people’s awareness of poor mental health, helping them to recognise the signs and take action.
Ndi otu anyi bu ndi mmadu nwere obi uto banyere oria uche na aru ike ha. N'ịbụ ndị nwere ahụmahụ ma na-ekere òkè, ndị na-azụ anyị na-ewepụta ọdịnaya dị mma ma na-akpali akpali nke nwekwara ike ịnweta maka onye nkịtị. Nwere ike ịtụ anya agụmakwụkwọ, ozi, ndụmọdụ bara uru na ọmịiko.